FANAMABARANA NATAON'ANDRIAMATOA PRAIMINISITRA MAHAFALY SOLONANDRASANA OLIVIER | Primature
Lapan’i Mahazoarivo 04 jona 2018 – Tonga izao ny fotoana izay tsy maintsy hanapahako hevitra amin’ny maha-olom-pirenena tomponandraikitra ahy (citoyen responsable), tonga ity ny fotoana izay tsy maintsy hanambarako ampahibemaso, hanaporofoako fa olom-panjakana aho (Homme d’Etat), izao no fotoana mety, izay hanaporofoako eo imason’ny Malagasy rehetra manerana an’i Madagasikara sy eo imason’izao tontolo izao fa nitazona ny teny izay nomeko aho (Homme de parole).
Tsara angamba no hanaovana jery todika kely ny tantara nahatongavantsika amin’izao sehatra izao. Nisy ny fanapahan-kevitra izay noraisin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalam-panorenana taorian’ny fitoriana nataon’ireo solombavambahoaka 73 avy ao amin’ny fanoherana, izay nangataka ary nitaky ny fanalana amin’ny toerana ny Filoham-pirenena ankehitriny. Ny fanapahan-kevitra izay noraisin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalam-panorenana dia tsy maintsy ravana ny governemanta ary apetraka amin’ny fotoana voafetra ny governemantan’ny mamaritra iraisana. Ekeko tsy misy ady varotra izany fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo momba ny Lalam-panorenena izany, ary tsy te-ho vato misakana rahateo ny tenako fa mijoro hatrany, mitondra ny anjara biriky eo amin’ny famahana ny olana eto amin’ny Firenena. Noho izany, tsy an-tery na amin’ny alahelo fa an-tsitrapo ary an-kafaliana tokoa no ho anolorako an’Andriamatoa Filoham-pirenena ny taratasy fametraham-pialako androany.
Araraotiko ny fotoana ohatran’izao satria tsy maintsy ataoko izay fametraham-pialana izay mba ahahafahan’ny Filoham-pirenena misafidy malalaka izay Praiminisitra hitantana ny governemantan’ny marimaritra iraisana. Eto aho dia manolotra ny fisaorana mitafotafo an’ny Filoham-pirenena tamin’ny nametrahany fitokisana tamin’ny tenako nandritra izay roa taona mahery kely nitantanako ny Governemanta izay.
Nandritra ny fotoana naha-teto amin’ity Lapam-panjakana Mahazoarivo ny tenako, dia nitory hatrany ny firaisan-kina ho an’ny vahoaka malagasy, ary nanambara hatrany ny maha-zava-dehibe ny tokony hidirana amin’izany hoe firaisan-kina na fampihavanam-pirenena izany. Niezaka koa aho, nanatona an’ireo tsy mitovy hevitra na firehana ara-politika tamiko ary niezaka hatrany niara-niasa tamin’izy ireny. Voaporofo izany tamin’ny fiaraha-miasa tamin’ireo solombavambahoaka teo anivon’ny Antenimieram-pirenena, sy tamin’ny fitadiavana marimaritra iraisana hatrany, indrindra tamin’ny fandrafetana ireo lalàna mahakasika ny fifidianana, eny fa na dia tsy tompon’ny teny farany aza ny tenako.
Tsy nisy nanenenako ny vita ary isaorako Andriamanitra Andriananahary nanome ahy fotoana, fahendrena, saina matsilo nahafahako nanatanteraka ny adidy masina teo amin’ny Tanindrazako, ary eto dia mamelà ahy ianareo raha hisaotra amin’ny fomba manokana ireo minisitra rehetra niara-dalàna tamiko tao amin’ny Governemanta, izay tsy nikatsaka afa tsy ny fomba ahafahana nampandroso an’i Madagasikara, na dia mbola tsy tratra aza ny tanjona eo amin’ny ady amin’ny fahantrana.
Isaorako etoana ihany koa ireo olom-boafidy isan-tsokajiny manerana an’i Madagasikara tamin’ny fanomezana tolo-tànana ny tenako nahavitàna iny dingana anankiray teto amin’ny firenena iny. Toy izany koa ireo solon-tenam-panjakana rehetra izay namana mpiara-miasa akaiky, ao ihany koa ireo Lehiben’ny Faritra teo amin’ny fahaizan’izy ireo niara-niasa tamiko sy tamin’ny Governemanta teo amin’ny fampandrosoana ny Firenena amin’ny ankapobeny, ary teo amin’ny nahafahana nametraka hatrany ny fitoniana teto amin’ny Firenena manokana.
Misaotra indrindra indrindra ihany koa ny mpiasam-panjakana rehetra ny tenako, ao anatin’izany ireo sendika maro isan-karazany izay nametraka ho loha-laharana foana ny tombontsoa ambonin’ny firenena na dia teo aza ireo fitakiana maro isan-karazany. Tsy nampitsanga-menatra fa nihodina hatrany ny milina mampandeha ny raharaham-panjakana. Ary farany nefa manan-danja indrindra, dia tiako ny misaotra eto ny Vahoaka Malagasy rehetra tsy vaky volo izay nimatimatesako hatrany teo amin’ny adidy aman’andraikitra niantsorohako ary tsaroako amin’ny fomba manokana eto ireo izay tena fadiranovana ao anatin’ny fahantrana hatramin’izao. Raha mbola omen’Andriamanitra herin-tsaina, herim-batana, fahendrena ny tenako n’aiza n’aiza ny toerana hisy ahy, dia tsy maintsy ahatsiaro ary hanampy an’ireny olona ireny aho. Ary eto am-pamaranana dia manao mandra-pihaona vetivety aminareo ny tenako.
Misaotra Tompokololahy, mankasitraka tompokovavy.
Lahatenin’Andriamatoa Praiminisitra Ntsay Christian nandritra ny lanonam-pifamindram-pahefana →